Ithegi: inethiwekhi yentengiso yeselfowuni | Martech Zone
Ithegi: inethiwekhi yentengiso yeselfowuni
I-UpSnap ibonelela ngomnatha wentengiso yeselfowuni onikezela ngaphezulu kwesigidi esinye senyanga ngenyanga. Kwaye ngentsebenziswano yabo nezinye zezona ndawo zinkulu, bayakwazi ukubonisa iintengiso kuthungelwano lomntu wesithathu kwinqanaba elingaphezulu kwe-100 yezigidigidi zenyanga ngenyanga. I-UpSnap ikwenza ukuba ujolise kubathengi abakufutshane neshishini lakho. Nje ukuba iphulo lakho liqhubeke, i-UpSnap iya kubonisa intengiso yakho yeselula kubathengi abakwi-radius yeemayile ezintlanu. Ukujolisa kutwabulula ngaphandle kwangaphandle
Ukuphumelela kweQhinga lokuThengisa ngeSelfowuni kunye nokuSebenza
NgoLwesihlanu, Septemba 12, 2014 NgoMvulo, Oktobha 12, 2015 Douglas Karr
Umndilili wentengiso yeselfowuni ukufikelela kubasebenzisi be-iPhone abayi-1,000 2.85 yi-XNUMX yeedola… hayi i-CPM embi xa ezinye iindlela zokuxhamla zixabisa ukuphindaphindwa kwento. Ungayichazanga eyokuba abasebenzisi beselfowuni bahlala bethenga kwaye bakulungele ukuthenga. Kodwa intengiso yomhlaba ojikeleze umhlaba ubanzi kwaye uyabhidisa. Zininzi iiplatifti zentengiso ezihambayo kunye nekhulu leendlela zokufikelela kumsebenzisi oselfowuni- ukusuka kwiintengiso, kwintengiso zentlalo, kwi-imeyile kunye nokunye. Ukubeka
I-Zapp360 ivuselela indlela ezithi iintengiso ezihanjiswayo zihanjiswe kubathengi ngokwendlela yoyilo kunye nokufaneleka kwayo. Intengiso yesiko yesiko ikakhulu ineenkampani ezisebenzisa nje intengiso yesikhangeli sedesktop- eyilelwe kakubi, engajoliswanga kwaye ayiqwalaseli indlela abasebenzisi abazibandakanya ngayo nezikrini ezincinci. Intengiso yefowuni yimveliso yezigidi ezili-14.3 zeedola kwaye zonke iingqikelelo kukuba iya kuqhubeka nokukhula, kodwa oku akuyi kwenzeka kude kubekwe amava omsebenzisi wokugqibela.
NgoMvulo, Aprili 14, 2014 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Ukujonga, ukuvela, ukucofa… Ndizibuza ukuba kutheni sisalinganisa kwaye sibhengeza ngokusekwe kwezi metric. IMassiveImpact yinethiwekhi yentengiso yeselfowuni efikelela ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi yabasebenzisi be-intanethi abasuka kumazwe ali-190 kwaye abayenzi. Basebenzisa i-CPA, okanye iindleko ngesenzo ngasinye, ukumisela amaxabiso entengiso. Kulungile… uhlawula kuphela xa kukho uguquko lokwenyani! Oku kuthetha ukuba imbuyekezo yakho kutyalo-mali iqinisekisiwe. IMassiveImpact ibonelela ngemodeli yentengiso ye-2-tier, usebenzisa